Isixazululo Senethiwekhi Yekhampasi |
Isixazululo se-DCN Transportation Network
Ingemuva le-AFC System lisho i-Automatic Fare Collection System, luhlelo lwenethiwekhi oluzenzakalelayo lokuthengiswa kwamathikithi, ukushaja, ukubheka kanye nezibalo zokuhamba kwezitimela. Uhlelo lusekelwe kwikhompyutha, Ukuxhumana, inethiwekhi, kanye nokulawula okuzenzakalelayo. Uhlelo lwe-AFC lungahlukaniswa ...
Isixazululo senethiwekhi ye-DCN Retail
Ukubuka Ingemuva I-shopper yanamuhla ifuna - futhi izoguqula ukwethembeka kwayo kweminye imikhiqizo lapho okulindelwe kungafezeki. Izindlela eziguqukayo zokuthenga ziphoqa abathengisi ukuthi bahlole okwenzeka esitolo ukuze bangahehi amakhasimende amasha kuphela, kepha bathole izindlela ezintsha zokugcina amakhasimende akhona ...
Isixazululo se-DCN Hotel Network
Ingemuva Kwemboni Yenethiwekhi Yehhotela Amatheminali ahlakaniphile aba amathuluzi adingekayo empilweni yethu yansuku zonke. Uma usohambweni, ungabadinga benze umsebenzi wasehhovisi kude, ukuze babambe iqhaza emhlanganweni okude, ukubhuka isitimela noma ithikithi lendiza, ukwamukela nokuthumela i-imeyili, njalonjalo. Ngakho-ke ...
Isixazululo se-DCN Healthcare Network
Imininingwane engemuva Esikhungweni sokunakekelwa kwezempilo, isibhedlela sihlale sinikela ngezinsiza zokwelashwa ezigulini, njengokunakekelwa kwezimo eziphuthumayo, ukuhlinzwa, ukubelethiswa kanye nezinsizakalo zokubeletha. Ukuze unikeze ukunakekelwa kwezempilo okungcono kakhulu, usebenzisa izindlela zokuxilonga ezinqenqemeni nezinokwethenjelwa ...
Isixazululo se-DCN Intellligent Campus Network
Imininingwane Yangemuva Ukuthuthuka okusheshayo kwe-Intanethi, ikakhulukazi i-virtualization, ifu, lobu buchwepheshe buqhuba uguquko ezimbonini zezemfundo. Ifu wuphawu olukhulu kunawo wonke emikhakheni yemfundo eyisisekelo kanye nemfundo ephakeme. Ukutholakala kalula kwezinsizakusebenza zemfundo kuyinto enkulu ...